ओली ठिक कि डा.गोविन्द ?
प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका निभाइरहेका छन्, डा.गोविन्द केसी । आप्mनो ज्यान जोखिममा राखेर कुनै पनि व्यक्तिले यसरी आमरण अनसन बसेको छैन । गंगामायाँले अनसन बसिन, सेलायो । अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र मानवाधिकारवादीहरुले उठाएको न्याय माँग्नेले न्याय नपाउने मुलुक बन्यो नेपालभन्दा पनि कसैलाई लाज लागेन, सरकारले बेवास्ता ग¥यो, अदालतले समेत निर्णय गर्न सकेन ।
नेपालमा राजनीतिक कति बाहुबली रहेछ । न्यायलाई पनि खेलाउँछ, व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा खेल्छ र बिधिको शासनको हुंकार गर्छ । यो अति भयो ।
अति विरुद्ध मानवीय हतियार उठाएर डा.गोविन्द केसीले आवाज उठाउँदा सरकार भन्छ– सरकार कानुन हेर्छ । यो भनेको डा.गोविन्द केसी मरे मरन् भनेको हो । सरकारले कानुन हेर्ने भए अनसनकारीलाई जनताले हेर्नुपर्ने रहेछ । सरकारसँग माँग छ अनसनकारीको । जनताले उनलाई साथ दिएका छन्, सरकार बेवास्ता गर्छ भने यो लोकतान्त्रिक सरकार हो कि अधिनायकवादी ?
सरकार संवेदनहीन हुँदै गएको छ । हिटलरी चरित्र विकास गर्दैछ ।
निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा पनि सरकार संवेदनहीन बन्यो । सरकार कानुन हेर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीले यो बलात्कार र हत्यामा कानुन किन हेरेनन्, कानुनले किन अपराधी चिनेन, अपराधीलाई कानुनले किन पक्रिन सकेन ?
हो संसारमा अनेक रहस्यमय हत्याहरु भएका छन् । दरवार हत्याकाण्ड पनि त्यस्तै हो । तर, निर्मला हत्या, सुनकाण्डदेखि रेशम चौधरी प्रकरणसम्म सरकार दोषी छ । राज्यले प्रमाण मेटाएका, प्रमाणमाथि खेलबाड गरेका प्रमाणहरु छन् । यी प्रमाणले भन्छ– सरकार अपराधीको पक्षमा भएकाले अपराधी उम्केको हो । अपराधी कानुनको घेरामा नआएको हो । सरकार यसबारे मौन छ । सरकार बोलछ, सर पर्दा संविधानको कुरा गर्छ, सर नपर्दा मौन रहन्छ । यस्तो पनि सरकार हुन्छ । यो सरकारले आफूलाई बिधिको प्रवक्ता भन्न नसुहाउने काम गरिरहेको छ । कानुन व्यवस्था मिचेर अराजकता सिर्जना गरिरहेको छ । अपराधीको संरक्षक बनिरहेको छ । यस्तै हो भने ऐतिहासिक कम्युनिष्टको सरकारको यो नै अन्तिम सरकार पनि हुनसक्छ । किनभने जनता लाटा छैनन्, सोझा छन्, नबुझेका छैनन् । मौन बसेका छन्, नबोलेका मात्र हुन् । सरकारले जनतालाई भ्रमित पारेर चलाउन सकिन्छ भनेर नसोचे पनि हुन्छ ।
दुई थान जहाज किन्दा ४ अर्व ३५ करोड भ्रष्टाचार । यो पनि नेकपाकै कार्यकालमा भएको छ । हिम्मत छ भने न्यायिक आयोग गठन गरेर जनतालाई स्पष्ट चित्र देखाओस् । अन्यथा दोष पन्छाएर र अपराध लुकाएर कति दिन सत्ता चलाउने ? ओली सरकार बरदान होला भनेको त सराप पो बन्यो ।